သင်၏ Mac မှဗိုင်းရပ်စ်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားနည်း | သတင်း ဂက်ဂျက်များ
သင်၏ Mac မှဗိုင်းရပ်စ်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားမည်နည်း။
Gadget သတင်း | 24/03/2022 12:40 | Apple
မည်သည့်ကွန်ပြူတာစနစ်ကဲ့သို့ပင် Apple ၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်၎င်း၏အားနည်းချက်များရှိသည်။. ၎င်းတို့ကို ကွန်ပျူတာသို့ဝင်ရောက်ရန် ဗိုင်းရပ်စ်များက အသုံးပြုကြပြီး အကြွေးဝယ်ကတ်များ သို့မဟုတ် ဘဏ်အသေးစိတ်များကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များရှိသည်။ အကြိမ်များစွာတွင်၊ အသုံးပြုသူသည် ၎င်းကိုပင် သတိမပြုမိပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေခြင်း။သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုပုံစံက အသံတိတ်ပြီး ကပ်ပါးပိုးကြောင့်ပါ။
အကယ်၍ ဤအရာသည် သင့်ကိစ္စဖြစ်ပါက သင့်အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု ရှိသည်- သင့် Mac ကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးနည်းလမ်းမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်၊ Mac မှဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများ ၎င်း၏ အတွင်းကုဒ် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို နက်နက်နဲနဲ သိရန်မလိုအပ်ပါ။
1 ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အရေးကြီးတာလဲ။
2 Mac မှဗိုင်းရပ်စ်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားမည်နည်း။
2.2 ထည့်သွင်းထားသောဆော့ဖ်ဝဲကို ဖယ်ရှားပါ။
2.3 ကာကွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲကို တပ်ဆင်ခြင်း။
ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အရေးကြီးတာလဲ။
အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များ အထောက်အထားခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကဲ့သို့သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများအား ဖုံးကွယ်ထားသည့် ပရိုဂရမ်များသို့။ ထို့ကြောင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အသုံးပြုသူသတိမထားမိဘဲ၊ PC တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိသူများထံ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အပြန်အလှန် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော်လည်း၊ အမှန်တကယ်တွင် ၎င်းတို့တွင် ကွဲပြားသော ဗိုင်းရပ်စ်များစွာရှိသည်။ မလွယ်သေးဘူး။ အားလုံး၏ malware များ ၎င်းတို့ကို ဟက်ကာ သို့မဟုတ် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များက အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ Mac များကို တိုက်ခိုက်ရန် အသုံးအများဆုံး malware အချို့မှာ Trojan၊ ransomware၊ phishing သို့မဟုတ် adware ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် မတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဒေတာများကို ရယူကြသည်။
အချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်အများစုသည် စနစ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် စနစ်တစ်ခုသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသည့် အခြားသော ယန္တရားများ ရှိသေးသည်။ မက်ဆေ့ချ်များ၊ အီးမေးလ်များ၊ ကြော်ငြာမှားခြင်း... မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လိုအပ်သောကိရိယာများရှိပါက မဲလ်ဝဲဝင်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
သတိထားရန် အ ရောဂါလက္ခဏာများ
အခြေအနေအများစုတွင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်သည် မမြင်နိုင်ဘဲ အချိန်အတော်ကြာအောင် မလှုပ်ရှားနိုင်ပုံရသည်။ ဤအဆင့်တွင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများ၊ လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အခြားစက်ပစ္စည်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ Mac များ ကူးစက်ခံရကြောင်းကို အချိန်နှောင်းသွားသည်အထိ မသိကြပါ။
အဆိုပါ၏အချို့ ရောဂါလက္ခဏာများ ကူးစက်ခံထားရသော Mac တွင် ရှိနေနိုင်သည့်အရာများမှာ- စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အပလီကေးရှင်းအသစ်များ အလိုအလျောက် တပ်ဆင်ခြင်း၊ နှေးကွေးခြင်း၊ သိုလှောင်မှု ပြဿနာများ၊ အသိမိတ်ဆွေများထံ အီးမေးလ်များနှင့် မက်ဆေ့ချ်များ အများအပြားပေးပို့ခြင်း... ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူတစ်ခုခု နိုင်ငံခြားဒြပ်စင်များ ရှိနေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား သံသယဖြစ်စေသင့်သည်။
ပပျောက်ရေးနေ့ el တပ်ဆင်ထားသော software ကို
အန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းပြီးစနစ်တွင်တွေ့ရှိပါက Apple မှအကြံပြုထားသည်။ ပရိုဂရမ်ဖယ်ရှားခြင်း။ ပြီးတော့ အမှိုက်ပုံးထဲ ပို့ပေးတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ Apple ၏ညွှန်ကြားချက်များ.
တပ်ဆင် de ကာကွယ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ
Mac တွင် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အပ်နှံသော ကုမ္ပဏီ အများအပြား ရှိပါသည်။ Mac စနစ် မြှင့်တင်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု. ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်များသည် Mac ကို ကာကွယ်ပေးပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော ပရိုဂရမ်များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။ အလားတူပင်၊ ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားသော ဝဘ်စာမျက်နှာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် Mac အတွက် လိုအပ်သော အကာအကွယ်မရှိသော အပလီကေးရှင်းများအကြောင်း သတိပေးသည်။
ယင်းကဲ့သို့ပင်၊ အချို့သော Malware များသည် လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲ၏ အသွင်အပြင်ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ မှတ်သားထားသော လူသိများသော ပရိုဂရမ်များသို့ သွားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » Apple » သင်၏ Mac မှဗိုင်းရပ်စ်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားမည်နည်း။
လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့် စျေးနှုန်းကောင်းမွန်သော အခြားရွေးချယ်စရာ ILIFE A11 [သုံးသပ်ချက်]
Doogee S98 အသစ်၏ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့် ဈေးနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။